DhiyabhorosiX 1.2: Diable kodhi reimplementation iri kunze | Linux Vakapindwa muropa
DhiyabhorosiX ndiro zita rekumisikidzwa kweiyo yekare vhidhiyo mutambo Diablo, pamwe nekuve munzvimbo yeruzhinji. Iye zvino, une vhezheni 1.2 inowanikwa iwe yaunogona kuwana pane yavo webhusaiti. GitHubKunyangwe, zvakadaro, iwe uchazoda kopi yemusoro wepakutanga iyo iwe yaunogona kutenga pairi Gogi kuti chirongwa ichi chikubatsire.
Kamwe zvakare, iyo yekuvandudza nharaunda iri kuita isinganakidze basa, kuenderana neiyo kuchengetedza mutambo wekare kuti ichiri chipenyu kwazvo, uye kuti ine vateveri vazhinji zvakare pakati pevatambi vanoshandisa Linux mapuratifomu. NaDhiyabhorosiX isu tinopawo rutsigiro rweLinux uye huwandu hukuru hwekuvandudza.
Iyi pasuru inowanikwa mune mamwe ma repos uye zvitoro zveapp kuti zvive nyore kuiswa. Semuenzaniso muUbuntu Software
Kana iwe waitoziva DevilutionX kubva kare uye unoshamisika nezve nhau dzinounzwa neiyi vhezheni nyowani, ndinofanira kukuudza kuti DevilutionX 1.2 iri yakatakurwa nekuvandudzwa akadai se:
Moto weGehena kutsigira.
Mutambo unoponesa pakati peDiablo neGehena remoto inogona kutamiswa zvizere.
Ndarama yakaunganidzwa zvino yaunganidzwa zvakare kana hesitori yakavhurwa.
Pepin anoporesa otomatiki.
Vamwe vatambi vanoratidzwa pamepu.
Chengetedza rondedzero chinzvimbo kana uchitenga nekutengesa zvinhu muzvitoro.
Chengetedza hotkeys uye inoshanda spell mumitambo yese
Gadza default inoshanda spell yemagamba matsva
Chiitiko chebhawa (chakaremara nekutadza)
Monster Health Bar (yakaremara nekutadza)
Otomatiki gadzirira ese mhando mhando pane yekutora kana kutenga (yakaremara nekutadza)
Otomatiki goridhe kurodha (yakaremara nekutadza)
Mujaho muguta (wakaremara nekutadza) (zvakare mune vakawanda).
Dzvitsa hushamwari moto kubva kumiseve uye zvitsinga (zvakaremara nekutadza)
Dzima mission randomization (bvisa neyakaomarara)
Adria recharges mana (akaremara nekutadza)
Magamba echiBarbari nemabhadhi muDiablo (akaremara nekutadza)
Asi izvi zvinyorwa ndezvezvinhu zvinoenderana nemitambo. Iripo zvechokwadi zvakawanda zvikuru mune iyi vhezheni 1.2 yeDiablo. Semuenzaniso, inosanganisira mameseji akasvibirira, kuvandudza kuitira kuti zvinyorwa zvidiki zvifambe pakumhanya chaiko, kuvandudza kurira kwemavhidhiyo, AppImage yevashandisi veLinux yekumisikidza zviri nyore, kugadziridza kwekushandisa ndangariro, kuvandudza mashandiro, muganho wakakwirira pamitambo yekuchengetedza, uye nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » DhiyabhorosiX 1.2: Diable kodhi reimplementation yabuda